ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: BURMA - URGENT ALERT!!!
BURMA - URGENT ALERT!!!
နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များအား နိုင်ငံတကာမှ အမြန်ဝင်ရောက် ကယ်တင်ရေး မဲဆောက်မြို့ Social Action for Women (SAW) အဖွဲ့မှ တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ ကျင်းပနေစဉ်
Save Our People by Forced Humanitarian Intervention Immediately!!!
ကျွန်ုပ်တို့၏ နာဂစ်မုန်တိုင်းဘေးဒုက္ခသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို အင်အားသုံး ၀င်ရောက်ကယ်တင်ရန် နိုင်ငံတကာ ကယ်ဆယ်ရေးတပ်များ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။
အင်အားသုံး ၀င်ရောက်ကယ်တင်ပေးရေး နိုင်ငံတကာရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ အင်တိုက်အားတိုက် တက်ညီလက်ညီ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြပါ။
ဒီမိုငတုံး..နအဖတောင် မဘန်းဘူး..မင်းတို့ကောင်တွေ အမှန်ကို သိပ်ကြောက်နေလား? ဘာအတွက်ဘန်းနေတာလဲ?
အချိန်နှင့်အမျှ ဒီသတင်းဟာ ပိုပိုပြီးကျိန်းသေလာနေပြီ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အခြေအနေတွေက တနေ့တခြားပိုပိုဆိုးလာနေတယ်။ နိုင်ငံတကာက ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ အခွင့်အရေးဟာ အခုအချိန်မှာ အမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။
ကျွန်တော်တို့လိုပြည်သူလူထူ့က နိုင်ငံတကာတပ်တွေလာရင် ကူပြီးတော့တိုက်ဖို့ လူစုထားကြပါစို့။ နိုင်ငံတကာက ဝင်စွက်ဖက်မယ်ဆိုပေမဲ့ ဘယ်သူမဆို သူ့နိုင်ငံသားကို မသေစေချင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ကိုယ်ဘဲတာဝန်အရှိဆုံးလေ။ ပြည်ပရောက် မြန်မာများက လူစုထားကြပါ။ ဒါမှအရေးကြုံတာနဲ့ အလုံးအရင်းနဲ့ တိုက်လို့ရအောင်။
ကျွန်တော်တို့က စစ်တပ်ကိုမုန်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ စစ်တပ်ထဲက လူတချို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှူ့တွေ၊ မတရားလုပ်တာတွေကိုသာ ရွှံရှာတာပါ ဆိုတာကို စစ်တပ်ကလူတွေသိအောင်ပြောကြပါ။ ကိုယ်ပိုင်ကားစီးဖို့ လူသတ်စရာမလိုဘူးဆိုတာကို စစ်သားတွေသိပါစေ။ ဘဝရပ်တည်မှူ့တခုအတွက် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ပစ္စည်းကိုခိုးစရာမလိုပါဘူး။
ဒီပုံသည် မြန်မာပြည်ကပုံ မဟုတ်ပါ http://bp1.blogger.com/_hVs5gnxwIQs/SCpigD4RbaI/AAAAAAAABKw/RDdfy6pDNsc/s1600-h/image001_122_336lo.jpg
အစစ်ကို ဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည် http://images.google.com/images?hl=en&rlz=1T5GGLL_enCA256CA271&resnum=0&q=tsunami%20bodies&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi